भावनात्मक बेवफाई - शैलीसँग पुरुषहरूमा सल्लाह स्टाइलिश पुरुषहरू
भावनात्मक बेवफाई धेरै धेरै खतरनाक अवस्था बन्न सक्छ शारीरिक बेवफाई आफै भन्दा, जहाँ तपाईंको पार्टनरले अर्को व्यक्तिसँग शारीरिक सम्पर्क राखेको छ। धेरै व्यक्तिको लागि यसले जोडीहरू बीचको सम्झौता भंग गरिरहेको छ किनकि भावनात्मक अंश बिभिन्न व्यक्तिसँग साझेदारी गरिएको छ।
यस ऐनमा हुँदा तपाई कसैसँग भावनात्मक र मायालु सम्बन्ध राख्नु भएको छ, विपरीत जोडीका लागि, यो सहि कार्यको रूपमा देख्न सकिदैन, किनकि यस्तो सोच्न सकिन्छ कि भविष्यमा उनीहरूसँग शारीरिक सम्पर्क हुनसक्दछ र यससँग बेवफाई गर्न नेतृत्व।
1 भावनात्मक बेवफाई के हो
2 भावनात्मक बेवफाई कसरी पत्ता लगाउने
2.1 यौन संभोगमा वृद्धि वा घट्ने?
3 भावनात्मक बेवफाई कसरी हटाउने
3.1 बेवफाई हटाउन मनोवैज्ञानिक उपचार
भावनात्मक बेवफाई के हो
यो हुन्छ जब दुई जोडी मा दुई व्यक्ति मध्ये एक अर्को व्यक्तिको साथ आत्मीय र भावनात्मक क्षणहरू हुँदैछ। धेरै connoisseurs को लागी भावनात्मक बेवफाई सिर्जना गर्ने यो तरिका हो किनकि यो हो जोडी बीच एक सम्झौता भंग छ, किनकि यसको मतलब अर्को व्यक्तिसँग प्रेममा पर्नु हो।
अन्य व्यक्तिहरूको लागि यो बेवफाई हुँदैन किनभने यो उपभोग वा सेक्सको क्षणमा पुगेको छैन, यद्यपि अरूहरूका लागि कि त्यहाँ एक साधारण भाँडो छ वा हात समात्नु अघि नै यो छ। विश्वासघात वा बेवफाई विचार गरिनेछ एक जोडी बीच सहमत भएका सम्झौता वा सीमामा निर्भर हुन्छ।
भावनात्मक बेवफाई कसरी पत्ता लगाउने
यो सजिलैसँग पत्ता लगाउन सकिन्छ कि अर्को व्यक्तिले पत्ता लगाउन सक्छ अर्को व्यक्तिसँग भावनात्मक मुठभेड गर्न पाउनुहोस्, तर यो अनुमान गर्न पनि गाह्रो हुन सक्छ कि यदि तिनीहरू एकदम आरक्षित छन्। यसको लागि हामी दिशाहरूको केही श्रृंखलाहरू औंल्याउनेछौं ताकि तपाईं यो तथ्य पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग खुला र स्थिर संवाद कायम राख्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई थाँहा हुन्छ कुराकानीको केही समयमा सधैं त्यो अन्य व्यक्तिलाई दिमागमा राख्नुहोस्। धेरै अवसरहरूमा यो हुन सक्छ उनको बारे लगातार कुराकानी पनि तुलना।
पनि सक्छ तपाईंसँग भएको भेटहरू उल्लेख गर्नुहोस् यसलाई धेरै महत्त्व दिए बिना, तर शंका ट्रिगर गर्न सकिन्छ जब उसले तपाईंलाई उसको नाम पनि बोलाउँदछ। एनोटेशनहरू जुन तपाईंले योगदान गर्न सक्नुहुनेछ त्यो यो हो कि तपाईं आफूले पाउनुपर्ने सबै कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ र तपाईंको जीवनमा के हुन्छ तपाईंको साथीको अघि।
भावनात्मक बेवफाई व्यक्तिगत दूरी सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको आफ्नै पार्टनरसँग, तपाइँले यसलाई हेर्नुपर्दैन तर सबै सन्दर्भहरूमा यसलाई अनुभव गर्नुपर्दछ। साथै, तपाईं अब उस्तै भावनात्मक भावना महसुस गर्दैनौं, योजना बनाउन मा चासो कम छ वा सहअस्तित्व को संघर्ष हराएको छ देखाउँदै कि त्यहाँ केहि चीजहरू छन् कि ध्यान छैन।
यौन संभोगमा वृद्धि वा घट्ने?
यो निस्सन्देह सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दा हो। यो तपाइँको पार्टनरले महसुस गरेको हुन सक्छ पहिले भन्दा सेक्सको लागि धेरै चाहना र अधिक सक्रिय बन्नुहोस्। यो यस्तो हुन्छ किनभने अविश्वासी व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको लागि उसको इच्छा वा शारीरिक आकर्षणको प्रोजेक्ट गरिरहेको हुन्छ र यसलाई आफ्नो पार्टनरतर्फ मोडिरहेको छ। अर्कोतर्फ, विपरित हुन सक्छ, कि अर्को व्यक्ति धेरै टाढा छ र कि तपाईंको यौन इच्छा कम हुँदैछ बिस्तारै सम्म यो लगभग अस्तित्वमा रहन्छ।
भावनात्मक बेवफाई कसरी हटाउने
हामीले सुरूमा समीक्षा गरे अनुसार, एक भावनात्मक बेवफाई एक खराब अवस्था मा पतन गर्न सक्छन्। त्यहाँ यौन व्यभिचार छ जहाँ दम्पतीले अर्कोसँग समय र छोटकरीमा सुत्न सक्दछन्। तर त्यहाँ भावनात्मक बेवफाई छ जब पहिले नै एउटा विशेष सम्बन्धको कारण भएको छ अर्को व्यक्तिको साथ कि यो साझेदार नै होईन, यदि त्यहाँ कुनै सेक्स छैन भने पनि।
यदि तपाईं आफ्नो पार्टनरलाई हराउन चाहनुहुन्न भने, उत्तम विकल्प हो यस विषयमा उनको अनुहार कुरा गर्नुहोस्। तपाइँले कसरी महसुस गरिरहनु भएको छ भनेर तपाइँले बुझाउनु पर्दछ यस्तो तथ्य भन्दा पहिले कसरी चीजहरू बुझ्ने। तपाईंले उनीहरूका व्यवहार परिवर्तन भएको तरीकाबाट, सबै संकेतहरू उनीहरूले प्राप्त गरिरहनु भएको र उनीहरूले कसरी व्यवहार गर्ने जस्ता सबै विवरणहरू तपाईंले थप्नु पर्छ।
तपाईले प्रसंगको कुरा बुझ्नु पर्छ र घृणा को सबैभन्दा ठूलो चरम सम्म पुग्न कहिल्यै र हिंसा को कम। तथ्यहरूको स्पष्टीकरण दिनको लागि निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ र कुन उत्तम समाधान हुन सक्छ भन्ने निर्धारण गर्न आवश्यक छ।
यदि तपाईं सम्बन्ध जारी राख्न निर्णय गर्नुहुन्छ भने, दुबै पक्षहरूमा एक ठूलो प्रयास हुनुपर्दछ। पक्कै पनि अन्तिम निर्णय मा छ माफी माग्ने र यस्तो बेवकूफ पार। तपाईंले सम्बन्ध पुन: प्राप्ति गर्नुपर्नेछ र त्यो दोस्रो मौकाको लागि आफैं नविकरण गर्नुहोस्।
बेवफाई हटाउन मनोवैज्ञानिक उपचार
यो बेवफाई पार गर्न सजिलो छैन र विश्वासघातको यस प्रकारको आधारमा पुन: प्राप्ति गाह्रो हुन सक्छ। यसका लागि, अविश्वासयोगी जोडीहरू बीच समस्याहरूमा सहभागी हुन सक्षम हुन त्यहाँ विशिष्ट र वर्गीकृत मानिसहरू छन्।
मनोवैज्ञानिक थेरापी प्रस्ताव गरेर एक स्वस्थ तरीकामा जोडीलाई पुनर्गठन बनाउन कोशिस गर्दछ सबै उपकरणहरू तपाइँसँगै तपाइँको सम्बन्ध पुन: प्राप्त गर्न आवश्यक छ। घटनामा जब ब्रेक भएको छ, एक प्रयास गरिने छ काम डिप्रेसन यस कारणले गर्दा। पेशेवरले प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान र आत्म-सम्मान पुन: बढाउनु पर्छ, र ब्रेकअपले उसलाई अगाडि बढ्न अनुमति दिनुपर्दछ। थप सुझावहरूको लागि तपाइँ "मा हाम्रो लेखहरू पढ्न सक्नुहुन्छकसरी एक ब्रेकअप मा प्राप्त गर्न"वा"तपाईको भूतपूर्व बिर्सन सल्लाह"।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » फिट » जोडी र सेक्स » भावनात्मक बेवफाई
कसरी जान्ने कि यदि कसैले तपाइँलाई माया गर्छ तर तपाइँलाई भन्दैन
पुरुषहरूको लागि Hipster कपाल